About - Meals on Wheels
Deriska Caawinta Deriska
Metro Meals on Wheels waa iskuxidhka barnaamijyada 32 Meals on Wheels ee aagga metro Cities. Iyada oo lala kaashanayo barnaamijyadeena, waxaan hogaamineynaa dadaalka lagu hubinayo in dadka ka tirsan beesheena ay helaan cunooyinka nafaqada leh iyo isku xirnaanta aadanaha ee ay u baahan yihiin si ay uga caawiyaan inay si madax banaan u noolaadaan.
Meals on Wheels waa adeeg bulshada ku saleysan oo bixiya cusub, nafaqo leh cuntada la geeyey si toos ah guryaha waayeelka iyo shaqsiyaadka naafada ah dhamaan magaalooyinka mataanaha ah. Marka lagu daro bixinta joogtada ah ee cuntooyinka caafimaadka leh, tabaruceyaasha daryeelka waxay bixiyaan xiriir bulsho oo ka caawiya dadka cuntada qaata inay si madax-bannaan ugu noolaadaan guryahooda.
La kulan shaqaalaheena u heellan u adeegidda deriskeenna Magaalooyinka Mataanaha ah.
Baro fursadaha hadda jira ee ka jira shabakadda Cunnada maxalliga ah ee shabakadda 'Wheels'.
Metro Meals on Wheels waxaa la aasaasay 1997 iyadoo ah isku-xidhka barnaamijyada Twin Cities Meals on Wheels, kuwaas oo in badan oo ka mid ahi ay u adeegayeen deriskeenna muddo shan iyo toban sano ah.
Warar iyo waxyaabo kale
Hel wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan waxa ka dhacaya Cuntada Lugaha.
Halkan ka hel Warbixinteena Sannadlaha ah, foomamka canshuurta iyo joornaalada daabacan.
Su'aal ma ka qabtaa Cuntada Lugaha Waxaan ku dadaali doonnaa inaan halkaan kaga jawaabno.
Caawinta deriska inay caafimaad ahaadaan guryahooda
Waxay si weyn iiga caawiyeen sidii aan noloshayda dib ugu soo celin lahaa ka dib markii kelyo lagu tallaalay, illaa aan ka helayo raaxo inaan ku laabto jikada.
Rudolph, Cunto qaataha Wheels